वर्णन मिडिया कृष्ण सिटौलाका काला कर्तुत : सुडान घोटाला, आलम प्रकरणदेखी अवैद्य नागरिकता वितरणसम्म - वर्णन मिडिया
०५-कार्तिक-२०७६ | ०७:४२:३९ pm
काठमाडौं । रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले कांग्रेसका सांसद एवं रौतहट घटनाका मुख्य दोषि मोहमद आफ्ताव आलमलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत गरे ।
यसअघि १२ वर्षको अवधीमा अरु १५ प्रहरी प्रमुख भएर रौतहटमा आएपनि कसैले यो हिम्मत गर्न सकेका थिएनन् । हालका प्रहरी प्रमुख एसपी खत्रीले अनुसन्धान छिट्टै टुंगोमा पुग्ने बताएका छन ।
रौतहटको राजपुर नगरपालिका–२ फरहदवामा २०६४ चैत ७ गते राति विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा लगेर मारिएको थियो ।
प्रहरीले घटनामा मारिएका व्यक्तिको मोजा, गन्जी, घाइतेलाई इँटाभट्टासम्म र्पुयाउन प्रयोग गरिएको ट्याक्टर तथा अन्य सबुत प्रमाण नियन्त्रणमा लिइसकेको बताएको छ ।
घटनाका दोषिलाई उन्मुक्ति दिन राजनीतिक दबाब नदिएर प्रहरीलाई दोषि पक्रन र निष्पक्ष छनविन गर्न निर्देशन गरिएको भए उक्त घटनाका दोषिमाथि त्यतिबेला नै कारबाही हुन्थ्यो तर त्यसो भएन, यस घटनामा आफ्ना पार्टिका नेता आलमलाई नेता सिटौलाले आफ्नो पदको दूरुपयोग गर्दै दोषिलाई उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ ।
गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र अन्य राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको दबाबका कारण दोषीले उन्मुक्ति पाए भन्नेमा कुनै आशंका देख्न सकिन्न । १२ वर्षअघि रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेबाट ‘माथिको आदेश’ भन्दै घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन भएको प्रहरीको एक उच्च स्रोतको भनाई छ ।
त्यसबेलाका एक डीआईजीका अनुसार ‘दबाबका बीच पनि त्यतिबेला प्रहरीले घटनामा संलग्नमाथि सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय मागदाबी गरेको थियो ।’
तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौला, गृहसचिव मैनाली र आईजीपी राणाले यसबारे आफू जानकार नभएको भन्दै पन्छिए, एउटै पार्टीका गृहमन्त्री रहेका बेला सोही पार्टीका नेतामाथि जन्मकैदको सजाय दावीसहित प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा गृहमन्त्रीले थाहा नपाएको भन्नु ‘घटना ढाकछोपको प्रपञ्च’ भएको आम मानिसले सहजै बुझ्न सक्छन् ।
अहिले भइरहेको अनुसन्धानले कसुर पुष्टि गर्ने प्रशस्त आधार खडा गरेको देखिन्छ । प्रहरीले आरोपितसँग सवाल जवाफ बयानका अतिरिक्त प्रमाणका रूपमा घटनामा घाइते भएका पीडितको फरेन्सिक जाँचसमेत गरिसकेको छ ।
कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला तत्कालिन समयमा गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली ओहोदामा हुँदा पनि उक्त घटनाका दोषिलाई कारबाही गर्न कुनै कदम नचाल्नुले पनि उनले दोषिलाई उन्मुक्ति दिन प्रपञ्च गरेको आम मानिसले सजिलै अड्कल गर्न सक्छन् ।
अब अहिले आएर यदि कांग्रेस नेता आलमलाई दोषि प्रमाणित गरी कारबाही गरियो भने कांग्रेस नेता सिटौलालाई पनि त्यसबेला घटना लुकाउन सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरी कारवाही गरिनुपर्छ ।
यसअघि नेता सिटौला गृहमन्त्री भएकै बेला सुडान घोटाला भएको थियो । त्यतिबेला जसरी अहिले रौतहटमा आलम प्रकरणका पिडितले न्याय नपाएर तड्पिनुपरेको छ , त्सैगरी त्यतिबेला सुडानमा शान्तिसेनामा गएका नेपाली सैनिकहरुले अन्याय भोगेका थिए ।
हतियार खरिदका क्रममा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको थियो । नेपाली सैनिकले विदेशीहरुका अत्याधुनिक हातहतियारका अगाडी सामान्य एसएलआरले भिड्नुपर्ने दयनिय अवस्थामा गुज्रिनुपरेकाे थियो ।
त्यसबेला सुडान घटनाको स्पष्ट छनविनमा सहयोग नगरेर नेता सिटौला भिलेनको भूमिकामा प्रस्तुत भए, पछि आलम प्रकरणमा पनि सिटौलाले जनताको पिरमर्कालाई लत्याएर आफुना पार्टिका नेता आलमलाई संरक्षण दिएर उल्टै रौतहट घटनालाई लुकाउन प्रयास गरे । १२ वर्ष हुँदासम्म पनि रौतहट घटनाका पिडितले न्याय पाउन सकेनन् । जनतालाई न्याय दिन नसक्ने नेताज्यूले किन शक्ति ओगटेर बसिरहनु ?
सुडानमा पहिलो कार्यकाल सकेर फर्केका प्रहरीले बयानका क्रममा भनेका छन् – “हामी १४ महिनाको प्रतीक्षापछि २०६५ कात्तिक ३ मा पुगेर २०६६ साउन ३ मा फर्कियौं ।
त्यति बेलासम्म पनि एपीसी (आम्र्ड पर्सनल करिअर) नपुगेकाले बंगलादेशका एपीसीमा संयुक्त गस्ती गर्याैं । विद्रोहीका अत्याधुनिक हतियार एके–४७ सँग कमजोर र पुराना एसएलआरले मुकाबिला गयौं ।
सुरक्षा हेल्मेट पनि बुलेटप्रुफ नभई भीड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने उपलब्ध गराई जोखिममा पारियो । ब्रान्ड उल्लेख नभएको पानी शुद्धीकरण प्लान्टले पानीको फ्लोरिक नियन्त्रण गर्न नसकेकाले धेरै कर्मचारीलाई एपेन्डिसाइटिसलगायत स्वास्थ्य समस्या देखियो ।
तीन जनाको त शल्यक्रिया नै गर्नुपर्यो । ट्यांकर, पानीका ट्यांकर र ट्रेलरले काम गरेको छैन । लेभल–१ अस्पतालमा जनशक्ति अभाव छ र एम्बुलेन्स भरपर्दो छैन ।
ट्रयाकसुट, ज्याकेट र ब्यागलगायत पोसाक गुणस्तरहीन भएकाले अन्य मिसनका सदस्यको अगाडि लगाउन लाज लाग्थ्यो । अन्य मिसनका सदस्यले व्यवस्थित खालका लञ्च र टिफिनका बक्सहरू प्रयोग गर्थे ।
हामी ठूलो डेक्चीमा भात र बाल्टिनमा दाल राखेर उनीहरूबाट लुकेर खाना खान्थ्यौं । पोसाकबापत दिइने तीन महिनाको दुई सय चार अमेरिकी डलर हामीलाई दिइएन ।
मिसनमा कार्यरत रहँदा भौतिक पूर्वाधार र बन्दोबस्तीका सामान गुणस्तरयुक्त नभएको, सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक सामग्री नभएबाट जीउ, ज्यानमा समेत सधैं खतरा रह्यो । सधैं जोखिममा काम गर्नुपर्यो ।
अर्को देशको सहयोगमा काम गर्दा हीनताबोध भई शिर ठाडो गरेर आफ्ना कुरा राख्न नसक्ने विवशता र बाध्यताबीच काम गर्नुपर्दा कति दर्दनाक हुन्छ, ती कुरा फाइलमा भेटिँदैनन् ।”
तत्कालिन गृहमन्त्री सिटौला थिए, यति ठूलो घोटालाका पछाडि उनको ठूलो हात रहेकोे हुनसक्ने कुरा कसैले नजर अन्दाज गर्न सक्दैन् । समितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली, महानिरीक्षक ओमविक्रम राणादेखि पूर्वमहानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङ र महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीसहित दर्जनौं बहालवाला र अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृत यसमा मुछिएका छन् । सुुडान घोटालाको बेला पाउनुसम्म दुःख पाएका थिए नेपाली प्रहरीले ।
यतिमात्रै कहाँ हो र, रौतहट लगायतका क्षेत्रमा अवैद्य नागरिकता वितरणमासमेत तत्कालिन गृहमन्त्री सिटौलाको संलग्नता देखिएपनि उनीमाथि कुनै कारवाही नभएको देखिन्छ ।
त्यसबेला सीमाक्षेत्रमा रहेका भारतीय नागरिकलाई समेत ठूलोमात्रामा अवैद्य रुपमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । सिटौला गृहमन्त्री भएकै समयमा आइजीपि नियुक्ति प्रक्रियामा समेत उनले न्यायसंगत व्यवहार नगरी मनोमानी ढंगले आफ्ना नजिकका प्रहरीलाई आइजिपि बनाउन लागिपरेका थिए ।
त्यसबेला नियमानुसार राजेन्द्र बहादुर सिंह आइजिपि बनाइनुपर्ने भएपनि आफ्ना नजिकका ओमविक्रम राणालाई आइजिपि बनाउन जुटेका थिए । यस विषयलाई लिएर त्यसबेला पनि उनको जनस्तरबाट व्यापक अलोचना भएको थियो ।
यसरी एकपछि अर्को घटनामा मुछिएका नेता सिटौैलामाथि गहिरो अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन्छ । रौतहट घटनालाई जोड्ने हो भने आलमलाई मात्रै हैन नेता सिटौलालाई पनि पक्राउ गरेर गहिरो छानविन गर्न सकेमा मात्रै वास्तविक दोषिमाथि कारवाही हुनसक्ने र पिडितले न्याय पाउन सक्ने देखिन्छ ।
गृहमन्त्रि हुँदा सिटाैलाकाेमा थियाे तस्करकाे लस्कर
चीनले यो टापु किनेपछि अमेरिकामा खैलाबैला
सि चीनपिंगले प्रमसंग गोप्य कोठामा बोलेका कुरा भारतीय पत्रिकालाई कसरी थाहा भयो ?
बडा दशैको बेला यसरी मासु खाऔँ, केहि सावधानी अपनाऔँ : डा .अरुणा उप्रेती
प्रचण्डले राखेका ३ हजार भेटेनरी प्राविधिक ओलीले हटाए
वाइडबडी प्रकरण : देउवाले छानबिन माग गर्दा सरकार संकटमा ?
अव शिक्षक लगायतले अनिवार्य नेपालमै बनेका कपडा लगाउनु पर्ने
अब बोर्डिङका शिक्षकलाई सरकारी सरह तलब नदिई काम लगाउन नपाईने
खतिवडाले थाले राजदूतका लागि बार्गेनिङ, अर्थतन्त्रले राहत पाउने सङ्केत